Taliska Ilaalada Xeebaha in ay qoraan shaqaalaha joogtada ah | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaTaliska Ilaalada Xeebaha wuxuu sameyn doonaa shaqaalaysiin joogto ah ee shaqaalaha
19 / 12 / 2019 Shaqooyinka, GUUD, ISDIFAACA
taliska amniga xeebta
Taliska Taageerada Dayactirka ee Badda Cas ee İŞKUR ugu yaraan ardayda dugsiga hoose ka qalin jabisay waxay qortay shaqaaleynta shuruud la’aan ee KPSS. 16 ayaa ku dhawaaqay in qorista joogtada ah ee Taliska Ilaalada Xeebaha Taliska Ciidanka Ilaalinta Dayactirka Badda Madow ay ku dhawaaqday shuruudaha dalabka ee murashaxiinta codsan doona.
U fiirsashada Taliska Ilaalada Xeebaha
1. Codsiyada waxaa laga soo gudbin doonaa Agaasinka Gobolka ee Shaqaalaha iyo Machadka Shaqada / Xarumaha Adeegga Degmadda inta u dhexeysa 23-27 Disember 2019 ama : www.iskur.gov.tr lagu samayn karaa at.
2. Turkish Dibadda sharaf No. 2527 oo iyaga ka mid xor ah Mihnadaha iyo Arts ee Turkey, ururada dadweynaha ama kuwa gaarka ah si ay u noqon kartaa muwaadin Turkish, iyada oo aan waxba loo dhimayn qodobada sharcigaan ku saabsan In Shaqeeya ee goobaha shaqada.
3. Inaad buuxinin da'da 18 ee taariikhda lagu dhawaaqay, oo aan ka yarayn 36 jir (01.01.1984 iyo wixii ka dambeeya)
4. Kuwa ka qalin-jabiya waaxyada ku xusan codsiyada xoogga shaqaalaha ama kuwa haysta shahaadada sayga shahaadada ee taariikhda kama dambaysta ah ee dalabka ayaa lagu dabaqi karaa hal xoog shaqaale (laan). Kuwa horey u galay waxbarashadda rasmiga ah ma dalban karaan.
5. Kuwa sameeyay howlahooda militariga, laga dhaafay ama dib loo dhigay ayaa dalban kara.
6. Soo iibsi ayaa lagu dabooli doonaa heer gobol oo dadka deggan Samsun way dalban karaan. Cinwaanka meesha ugu horeeya ee degmo ee ka diiwaan gashan Nidaamka Diiwaan galinta Dadweynaha ee Diiwaan galinta musharixiinta waa in la qaddariyo. Codsadayaasha dagan Samsun muddada codsashada lama aqbali doono.
7. Dembiyada ka dhanka ah amniga Gobolka, dambiyada ka dhanka ah dastuurka dastuurka iyo howshiisa, dembiyada ka dhanka ah difaaca qaran, dambiyada ka dhanka ah sirta dowlada iyo basaasnimo, lunsashada, musuqmaasuqa, laaluushka, xatooyada, musuqmaasuqa, khayaanada, ku xadgudubka kalsoonida, khayaanada musuqmaasuqa, qandaraasyada anshax xumo, akhlaaq xumo ku dhaqanka waxqabadka, lacag sharci darrada ah ee hantida ka timid dambiga ama tahriibinta
in aan la cambaareyn.
8. Xubinnimada, ku xirnaashaha ama xiriirinta, ama xiriirinta qaab dhismeedka, qeybaha ama kooxaha ama ururada argaggixisada oo ay go'aamisay Golaha Amniga Qaranka inuu ku kaco tallaabo lid ku ah amniga qaranka ee Gobolka.
9. Ma aha inay lashaqeeyaan ururada argagixisada, ma aha inay caawiyaan ururadaas, inay adeegsadaan ama u istcimaalaan kheyraadka guud iyo kheyraadka ay ku taageeraan ururradan, yaan lagu sameynin dacaayad ururadaas.
10. In aan laga xayuubin isticmaalka ku dhaqanka xuquuqda shacabka. 11. In aan laga eryin xafiiska dadweynaha ama shaqada iyada oo la raacayo sharciga anshax marinta ee hay'adaha dawladda iyo ururada. 12. Inaad haysato dukumenti muujinaya xaaladaha mudnaanta leh ee lagu xusay cutubka koowaad ee Qodobka 5aad ee Xeerarka Nidaamka iyo Mabaadi'da loogu talagalay Ku Shaqeynta Shaqaalaha Hay'adaha Dawladda iyo Ururada laga soo xulay musharraxiinta xaq u leh mudnaanta qoritaanka. (Xuquuqda mudnaanta leh ee lagu casuumay Taliska Taageerada Dayactirka Badda Xeebta ee Badweynta Ku-Dhageysiga ee ay ku codsadeen, laakiin aan u hoggaansamin xoogga aan ka ahayn awoodda xoogga, ee aan imtixaanka gelin, waa diideen shaqada ama waxay degeen xaaladda shaqaalaha joogtada ah ee dadweynaha looma isticmaali doono markii labaad.)
13. Imtixaan afka ah / ficil ah ayaa loo qabanayaa jagooyinka shaqo ee furan. Murashaxiinta u qalmi doona qaadashada imtixaanka afka ah / ficil ahaan waxaa lagu go'aamin doonaa iyaga oo saamiyo badan la keenayo goobta nootaayaha. Joogitaanka Nootaayaha, isaga ayaa loo qaadanayaa inuu imtixaanka galayo isagoo sita saamiyo; a. Liiska dhammaan codsadayaasha buuxiya shuruudaha, 4 jeer tirada shaqaalaha xoogga furan, b. Liiska dhammaan codsadayaasha xaq u leh mudnaanta sida waafaqsan shuruudaha codsiga, afar jeer tirada shaqaalaha shaqada banaan iyo isla tirada musharixiinta beddeli doonta ayaa go'aan laga gaari doonaa. Bakhtiyaa nasiibka waxaa lagu qaban doonaa Janaayo 4, 23 inta u dhexeysa 2020: 13-00: 16 oo lagu qabanayo hoolka isboortiga ee Mustafa Dağıstanlı (Hançerli Mh. Atatürk Blv. No: 00 İlkadım / SAMSUN). Liistada kuwa xaq u leh inay qaataan imtixaanka afka ah / ficil ahaan natiijada ka soo baxday barta ayaa laga heli doonaa bogga Qaab-dhismeedka Taliska Ilaalada Xeebaha (www.sg.gov.t waawaxaa loo daabici doonaa ogeysiin ahaan.
14. Taliska Taageerada Dayactirka Badda Madoow ee Xeebta ayaa hubin doonta in musharraxiinta aqoonta u leh iyo kuwa baddali kara ay go'aaminayaan bakhtiyaa-nasiibka ka hor nootaayaha malaha heerarka looga baahan yahay, iyo codsiyada murashaxiinta aan buuxin shuruudaha lama aqbali doono. Dukumiintiyada laga codsanayo musharixiinta u qalma inay galaan imtixaanka iyo taariikhda kontaroolka dukumiintiga waxaa laga heli karaa Internetka Taliska Ilaalada Xeebaha.www.sg.gov.t waawaxaa loo daabici doonaa ogeysiin ahaan. Asalka dukumintiga ee la codsaday kontroolka dokumentiga waa in la keenaa iyada oo ay la jiraan nuqul.
15. Natiijadda kontroolka dokumentiga, bedelkii musharraxa loo xushay maamulaha barbardhaca, kaas oo codsigiisa aan la aqbalin sababta oo ah dukumiinti qaldan ama dukumiinti la waayey, imtixaanka afka / imtixaanka ficilka ah waa la aqbali doonaa laga bilaabo murashaxa beddelka oo dukumiintiisii ​​ugu horreysay oo dhan loo xushay inuu ku beddelayo wax badan.
16. Taariikhda imtixaanka afka ah / ficil ahaan, waqti iyo goob dambe ee bogga Qaabka Ilaalada Xeebta (www.sg.gov.t waa) waxaa lagu shaacin doonaa nooca ogeysiiska, musharrixiinta looma jeedin doono cinwaanka si gooni gooni ah.
17. Imtixaanka afka ah / ficil ahaan waxaa lagu qaban doonaa Taliska Taageerada Dayactirka ee Badda Cas ee Xeebta si loo cabiro aqoonta xirfadeed iyo xirfadaha codsadayaasha iyo kartida ay waajibka ku tahay inay fuliyaan. 18. Si loogu tixgeliyo inuu ku guuleysto imtixaanka afka ah / ficil ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in la helo ugu yaraan 60 (lixdan) dhibcood Dhammaan codsadayaasha waxaa lagu qiimeeyaa in ka badan 100 (boqol) dhibco oo buuxa. boostada lama soo ogeysiin doono.
19. Si ay u awoodaan in ay bilaabaan imtixaanka, baaritaanka amniga iyo cilmi baarista archive waa in ay ahaadaan kuwa togan.
20. Murashaxiinta ku baastay imtixaanka waa inay cadeeyaan in xaaladdooda caafimaad aysan ku habooneyn shaqada iyo xirfadda ay ku sameyn doonaan warbixinta guddiga caafimaadka ee ay ka heli doonaan hay'adaha caafimaad ee buuxa ee ay oggolaatay Hay'adda Amniga Bulshada (SSI). Xaaladaha shaqada iyo shuruudaha shaqaaluhu sida uu qabo Qodobka 6331-aad ee Shaqada Caafimaadka iyo Sharciga Badbaadada Lambarka 15 Guddiga Caafimaadka ayaa qiimeyn doona warbixinnada wada jir ah warbixinnada caafimaad ee ugu horreeyay ee sheegaya in ay ku habboon yihiin shaqada ay qaban doonaan waxaa siin doona Takhtarka Goobta Shaqada.
TCDD iyo Xeebta Badbaadada Shaqaalaha Qoritaanka Shaqaaleynta ayaa la daabacay!
Maanta oo Taariikh ah: 9 Nofembar 1919 Gobolka Adana oo ka socda Taliska Gobolka Toros…
Maanta Taariikhda: 9 Nofembar 1919 Gobolka Adana oo ka socda Taliska Gobolka Toros Bölge
Maanta taariikhda: 9 Nofeembar 1919 Taliska Gobolka Talawalka ee Taliska Gobolka ee ...
Maanta taariikhda: 9 November 1919 Taliska Ammaanka ee Toros oo ku aaddan Taliska Gobolka ee ...
Taliyaha Guud ee Gendarmerie inuu qoro